I-Automatic Tire Inflators Factory, Suppliers |China Automatic Tire Inflators Abavelisi
Umatshini wokuFaka iTire ngokuzenzekela
• Umatshini wokuzifakela umoya wamatayara unokuzikhukhumeza okanye uthobe ngokuzenzekelayo kuxinzelelo olusetwe kwangaphambili xa uncanyathiselwe kwisikhondo sevalve yamatayara.
• Isilumkiso esivakalayo esivakala kwezona ndawo zingxolayo xa kufikelelwa kuxinzelelo lwetayara.
• Ubonelelwe ngesatifikethi solungelelwaniso, ukuchaneka kungaphezulu koMyalelo we-EC 86/217
• Umatshini wokufaka umoya wamatayara ozenzekelayo uyahambelana nejenereyitha yeNitrogen
• 1/4” iadaptha yobhedu yokuphuma nokuphuma: NPT, BSP okanye iNitto.
• Umboniso omkhulu we-LCD one-backlight onesilumkiso esivakalayo
• Umatshini wokunyuka kwamaxabiso ozenzekelayo sisisombululo esigqibeleleyo sokunyuka kwamaxabiso kwiindibano zocweyo zoomatshini, iziko lenkonzo yamatayara, iziko lokulusa ngokukhawuleza, izibonelelo zeemoto ezirentwayo kunye nabathengisi bezithuthi.
• Inqanaba loKhuseleko lwaMazwe ngaMazwe, IP56, libonelela ngokhuseleko lwemozulu.
• Iiyunithi ziyafumaneka kwi-12V, 120V okanye 240V.
• Ukugquma ngokuchanekileyo ngemibhobho ukuya kuma-50 m ubude
Umatshini wokumpompa womoya weSikhululo seGesi
• Umtshini wempompo yomoya wesikhululo segesi uyilelwe i-petroleum forecourts, ubonelela ngesisombululo esikhuselekileyo nesichanekileyo sokunyuka kwamaxabiso etayara.
• Ngokuzenzekelayo ivuthe umoya okanye ithobe naliphi na itayara ngokwexabiso elifunekayo ngemizuzwana
• Umtshini wempompo yomoya wesikhululo segesi wamkela amaqhosha angoomatshini amelana nomonakalisi
• Umboniso wemposiso yedijithali
• IP44 yokukala
• Umatshini wempompo yomoya wesikhululo segesi unikwe amandla yi: DC12V / AC120V / 240V.
Udonga lufakwe kwi-Automatic Tire Inflator
• Cwangcisa kwangaphambili uxinzelelo olufunekayo, kwaye udonga oluxhonywe kwi-automatic tire inflator luya kuzalisa itayara ngokuzenzekelayo kwaye luyeke kuxinzelelo olusethiwe.
• Udonga olufakwe i-automatic tire inflator luza kulumkisa umsebenzisi ngophawu oluvakalayo xa itayara lifikelele kuxinzelelo olufunekayo.
• Iyunithi efakwe eludongeni enethumbu lomoya le-30 ukufikelela ngokulula kuwo onke amatayara kwisithuthi.
• Iiyunithi zokulinganisa ezi-4 (i-psi, ibha, i-kPa, i-kg/cm2), inkqubo yoxinzelelo olugqithisileyo, isikrini se-LCD nokukhanya ngasemva.
• Udonga oluxhonywe kwisixhobo sokunyuka kwamaxabiso esizihambelayo sisisombululo esigqibeleleyo sokunyuka kwamaxabiso kwiindibano zocweyo zoomatshini, iziko lenkonzo yamatayara, amaziko okutya okukhawulezayo, izibonelelo zeemoto ezirentwayo kunye nabathengisi bezithuthi.
• Umgangatho woKhuseleko lwaMazwe ngaMazwe, IP44